flocculant ကို MBR အမြှေးပါးရေကန်ထဲသို့ထည့်နိုင်ပါသလား။
polydimethyldiallylammonium chloride (PDMDAAC)၊ polyaluminum chloride (PAC) နှင့် membrane bioreactor (MBR) ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုတွင် ၎င်းတို့နှစ်ခု၏ပေါင်းစပ် flocculant ဖြင့် MBR ကို သက်သာစေရန် စုံစမ်းခဲ့သည်။ အမြှေးပါးပေါက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ စစ်ဆေးမှုသည် ch...
Dicyandiamide ဖော်မယ်လ်ဒီဟိုက်အစေးကို အရောင်ခြယ်သည့် အေးဂျင့်
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေဆိုးသန့်စင်မှုတွင် ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ဆေးဆိုးခြင်း ရေဆိုးများသည် ကုသရန် အခက်ခဲဆုံး ရေဆိုးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းမှု၊ မြင့်မားသော chroma တန်ဖိုး၊ အာရုံစူးစိုက်မှုမြင့်မားပြီး ပြိုကွဲရန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည် အဆိုးရွားဆုံးနှင့် ကုသရခက်ခဲသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေဆိုးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
Polyacrylamide အမျိုးအစားကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း polyacrylamide အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးတွင် မိလ္လာကို ကုသခြင်း နှင့် မတူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ ထို့ကြောင့် polyacrylamide သည် အဖြူရောင်အမှုန်များဖြစ်သည်၊ ၎င်း၏ပုံစံကို မည်သို့ခွဲခြားရမည်နည်း။ polyacrylamide ၏ ပုံစံကို ခွဲခြားရန် ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်း (၄) ခု ရှိပါသည်။
sludge dewatering တွင် အဖြစ်များသော polyacrylamide ၏ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနည်းများ
Polyacrylamide flocculants များသည် sludge dewatering နှင့် မိလ္လာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် အလွန်ထိရောက်သည်။ sludge dewatering တွင်သုံးသော polyacrylamide pam သည် ထိုကဲ့သို့သော နှင့် အခြားပြဿနာများကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ဟု အချို့သော သုံးစွဲသူများက အစီရင်ခံကြသည်။ ဒီနေ့မှာတော့ လူတိုင်းအတွက် ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာပေါင်းများစွာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးပါမယ်။ : 1. flocculation အကျိုးသက်ရောက်မှု p...
pac-pam ပေါင်းစပ်မှု၏ သုတေသနတိုးတက်မှုအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
Xu Darong 1,2၊ Zhang Zhongzhi 2၊ Jiang Hao 1၊ Ma Zhigang 1 (1. Beijing Guoneng Zhongdian စွမ်းအင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ပေကျင်း 100022; 2. China University of Petroleum (Beijing)) ပေကျင်း 102249 ) Abstract : ရေဆိုးနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အကြွင်းအကျန် ကုသရေး နယ်ပယ်တွင်...
အရည်အသွေးမြင့် China Hard Water မှ Chlorine Fluoride အကြီးစားသတ္တု အနည်အနှစ် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
အကြီးစားသတ္တု ဖယ်ရှားသည့်အေးဂျင့် CW-15 သည် အဆိပ်မသင့်ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတမဖြစ်နိုင်သော လေးလံသောသတ္တုဖမ်းကိရိယာဖြစ်သည်။ ဤဓာတုပစ္စည်းသည် စွန့်ပစ်ရေထဲတွင် monovalent နှင့် divalent metal ion အများစုရှိသော တည်ငြိမ်သောဒြပ်ပေါင်းအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည် - Fe2+, Ni2+,Pb2+,Cu2+,Ag+,Zn2+,Cd2+,Hg2+,Ti+ and Cr3+, ထို့နောက် hea ကို ဖယ်ရှားသည့်ရည်ရွယ်ချက်သို့ရောက်ရှိသွားပါသည်။ .။
စက်ရုံတိုက်ရိုက် China Diallyl Dimethyl Ammonium Chloride Dadmac
မင်္ဂလာပါ၊ ဤသည်မှာ တရုတ်နိုင်ငံမှ သန့်စင်သော ဓာတုဗေဒပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအာရုံမှာ မိလ္လာအရောင်ခြယ်ခြင်းအပေါ်ဖြစ်သည်။ DADMAC ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်များထဲမှ တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ DADMAC သည် မြင့်မားသော သန့်စင်မှု၊ စုစည်းမှု၊ လေးပုံတစ်ပုံ အမိုနီယမ်ဆားနှင့် မြင့်မားသော အားသွင်းသိပ်သည်းဆ cationic monomer ဖြစ်သည်။ သူ့အသွင်အပြင်က အရောင်စုံ...
Acrylamide Co-polymers (PAM) အတွက် လျှောက်လွှာ
21-03-31 ရက်နေ့တွင် admin မှ
PAM ကို ပတ်ဝန်းကျင်စနစ်များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်- 1. ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆီပြန်လည်ရယူခြင်း (EOR) တွင် viscosity မြှင့်တင်ပေးသည့်အရာအဖြစ် နှင့် မကြာသေးမီက မြင့်မားသောထုထည် ဟိုက်ဒရောလစ်အက်ဆစ် (HVHF) တွင် ပွတ်တိုက်မှုလျှော့ချပေးသည့်ပစ္စည်းအဖြစ်၊ 2. ရေသန့်စင်ခြင်းနှင့် sludge dewatering အတွက် flocculant အဖြစ်၊ ၃။အဖြစ်...
ရေသန့်စင်ရေး ဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြုနည်း ၁
20-12-10 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ရေသန့်စင်ရေးဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုနည်း 1 ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုပိုမိုဆိုးရွားလာသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စွန့်ပစ်ရေများကို ကုသရာတွင် ပိုမိုအာရုံစိုက်လာပါသည်။ ရေသန့်စင်ရေးဓာတုပစ္စည်းများသည် မိလ္လာရေသန့်စင်စက်အတွက် လိုအပ်သောအကူများဖြစ်သည်။ ဤဓာတုပစ္စည်းများမှာ မတူညီပါ...
ရေသန့်စင်ရေး ဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြုနည်း ၂
admin မှ 20-11-02 ရက်နေ့တွင်
ရေသန့်စင်ရေး ဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြုနည်း3ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု ဆိုးရွားလာသောအခါတွင် စွန့်ပစ်ရေကို ကုသရာတွင် ပိုမို အာရုံစိုက်လာပါသည်။ ရေသန့်စင်ရေး ဓာတုပစ္စည်းများသည် မိလ္လာရေသန့်စင်ရေး ကိရိယာအတွက် လိုအပ်သော အရန်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဓာတုပစ္စည်းများမှာ ကွဲပြားသည်...